ट्राफिकले का’टे ज’रिवानाको रसिद, तिर्ने पैसा नभएपछि आ’त्म’ह’त्याको प्रयास - Nepal Insider
Home/समाचार/ट्राफिकले का’टे ज’रिवानाको रसिद, तिर्ने पैसा नभएपछि आ’त्म’ह’त्याको प्रयास
ट्राफिकले का’टे ज’रिवानाको रसिद, तिर्ने पैसा नभएपछि आ’त्म’ह’त्याको प्रयास
काठमाडौं। ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम मिचेपछि का’टेको जरिवाना तिर्ने पैसा नभएपछि एक टेम्पो चालकले आ’त्म’ह’त्याको प्रयास गरेका छन् । आज तकको समाचार अनुसार भारतको अहमदाबाद शहरमा एक अटोरिक्सा चालकले आ’त्म’ह’त्याको प्रयास गरेका हुन् । ट्राफिकले उनलाई १८ हजार रुपैयाँका चलान का’टेका थिए ।
भारतमा अहिले नयाँ ट्राफिक नियम लागू भएको छ । नयाँ नियमअनुसार जरिवानाको राशी निकै धेरै हुन्छ । यो नियमका कारण अहिले भारतमा जनता त्रा’समा छन् । राजु सोलंकी नामका यी टेम्पो चालकलाई आत्महत्याको प्रयासपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण उनी जरिवानाको राशी तिर्न असमर्थ छन् । जरिवाना नतिरेपछि पुलिसले उनको टेम्पो ज’फत गरेको छ ।
राजुकी पत्नी विनाका अनुसार उनीहरुको परिवारसँग २ छाक टार्न पनि पैसा पुग्दैन । उनीहरुका सन्तान र उनीहरु कसरी जीवित रहन्छन् भन्ने नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो । परिवारको आर्थिक स्थिति नाजुक भएका कारण यति धेरै ज’रिवाना तिर्नु परेपछि राजुले आ’त्म’ह’त्याको प्रयास गरेका हुन् । राजुका अनुसार टेम्पो ज’फत भएपछि उनीसँग अब कमाइको कुनै बाटो छैन । राजुले स्नातकसम्म पढेका छन् तर पढाइ भएर पनि जागिर नपाएपछि टेम्पो चलाउन थालेका हुन् ।
श्वेता खड्का कसको बेहुली बनिन् ?
जंगलमा फोटोग्राफरले खिचे फोटो, उनलाई पनि थाहा थिएन यसमा के लुकेको थियो ?
११ दिनपछि रि*हा भएका रविविरुद्ध खेमले निर्मला पन्तको विषयलाई मुद्दा बनाएर हाले यस्तो उजुरी !